IGranary Cottage, iHackness emaphandleni eScarborough
Indawo entle ehlaziyiweyo yenkulungwane ye-18 kwiPaki yeSizwe yeMoors yaseNorth York. Ulala 6 kumagumbi okulala ayi-3 een-suite. Ikhitshi / isidlo sangokuhlwa, igumbi lokuphumla, iTV. Ukuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile ukusuka emnyango, iilwandle ezikufutshane kuNxweme lweYorkshire: Scarborough, Filey, Whitby.
Ukususela ekuqaleni kukaSeptemba ukuya phakathi ku-Okthobha, i-Granary Cottage ifumaneka kuphela njengendawo ebanzi yegumbi elinye lokulala kumgangatho ophantsi, ukulala iindwendwe ezi-2, ngexabiso elincitshisiweyo kakhulu. Nceda ufowunele iinkcukacha ezithe vetshe.
Le ndlu yeholide enamagumbi amathathu iphangalele, ifakwe kakuhle, ixhotyiswe kakuhle kwaye ikhululekile kakhulu. Ikwindawo yasemaphandleni enoxolo, ejonge kwintlambo entle nethe cwaka yaseTroutsdale, yona ngokwayo iyimfihlelo egcinwe kakuhle nasekhaya. I-cottage ilungele ukubaleka-kuko-konke-konke kusapho oluthanda amaphandle okanye abahlobo. Indawo yasemaphandleni: iivenkile ezikumgama oziikhilomitha ezi-6 eScalby; Iikhilomitha ezi-7 ukusuka eScarborough.
IGranary Cottage ikumda wepaki yeSizwe yaseNorth York Moors, entliziyweni yendawo ethandekayo nephantsi kakhulu esemaphandleni naselunxwemeni. Ukusuka emnyango, hamba ngeenyawo ujonge intlambo yeTroutsdale, enehlathi laseDalby ngasentshona, ilali yaseHackness ngasempuma kunye nomlambo iDerwent oqukuqelayo. Iindawo ezikufutshane zokutyela ngaphandle yiMoorcock Inn eLangdale End (Thur-Sun kuphela) kunye ne-Everley Cafe kufutshane neHackness (emini kuphela).
Iibhayisekile zeentaba ziya kuzithanda iindlela eziphuma endleleni e-Dalby Forest (ungayirenta ikiti apho), kwaye iHlathi nayo ine-Go Ape kwi-treetops, kunye ne-zipwires enkulu kunye ne-vertigo-inducing set-up eqhelekileyo.
EScarborough ngokwayo kukho ubungangamsha beVictorian obunciphileyo, iilwandle ezimbini ezithandekayo ezinesanti, uluhlu lwezindlu ezinemibala elwandle eNorth Bay kwaye, kwikona nganye, intlanzi emnandi kunye neetships. Khangela, kwakhona, iimbatyisi ezintsha, unonkala kunye nelobster kwi-South Bay kiosks, yiva iikonsathi zasehlotyeni zedeck-chair e-Spa, uqeshe i-pedalo e-Peasholm Park, urente ibhodi yokusefa okanye ibhodi yomzimba (kunye ne-wetsuit!) eNorth Bay okanye eCayton Bay, hamba i-clifftops ukusuka kwiziphelo zombini zedolophu, dlala i-minigolf, uhlolisise inqaba, okanye ukhangele iivenkile ze-Victoria Road ze-junk ze-vintage.
Ebusuku, bona umboniso kwi-Spa okanye uStephen Joseph Theatre, okanye ufumane amatikiti angaphambili kwi-Open Air Theatre okanye kwikonsathi yaseDalby Forest. Iiklabhu ze-Scarborough kunye neeklabhu zinomculo oxakekileyo ophilayo kunye nomboniso wekaraoke.
Ukuya kumantla namazantsi kukho iimayile zonxweme oluhle-iRobin Hood's Bay, iWhitby, iSandsend, iStaithes, iFiley, iBempton, iFlamborough Head.
Ungaphoswa kukuqhuba okanye uhambe ngeenyawo kwiNorth York Moors ekufutshane kwaye undwendwele ezinye zeedolophu ezintle kunye neelali ezibangqongileyo, ezinje ngePickering, Thornton-Le-Dale, Hutton-Le-Hole, Goathland. Ukusuka kwi-Pickering unokukhwela kuloliwe odumileyo wePickering ukuya kwi-Whitby steam-indlela eqaqambileyo yokubona ama-moors, kunye nethuba lokwehla ezilalini ezisendleleni.
Kwigrosari kukho iivenkile ezisisiseko eScalby, iikhilomitha ezi-6 kude. Ezona venkile zikulungeleyo ukufikelela eScarborough yiProudfoot, iAldi, iTesco (iya kuzisa kwindlwana) kunye neSainbury's (ziya kuhambisa kwindlu encinci). Okanye undwendwele iholo yemarike yemveli yaseScarborough, embindini wedolophu, uyokuthenga iziqhamo, imifuno kunye nenyama.
IGranary Cottage yeyomhlaba weHoliday Cottage Holiday, ishishini losapho elisuka eScarborough, kuMntla Yorkshire (jonga ezinye izintlu zethu - sinezindlu zangasese eSkotlani, eMntla Yorkshire, eCumbria nakwi-County Durham).
IGranary Cottage yeyomhlaba weHoliday Cottage Holiday, ishishini losapho elisuka eScarborough, kuMntla Yorkshire (jonga ezinye izintlu zethu - sinezindlu zangasese eSkotlani, eMntl…